06 / 08 / 2021 06 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 556 Views စာ4မှတ်ချက် 910001 သစ်တောအတွင်းရှိရဲတိုက်, 910010 မဟာငါးဖမ်းလှေ, 910016 ရဲအရာရှိရဲ့ Safe, ၉၁၀၀၁၇ Kakapo, ပျံသန်းမှု၏ 910028 လိုက်စား, အုတ်ခဲ, BrickLink ဒီဇိုင်နာအစီအစဉ်, ဒံယလေကဗန် Zonneveld, Lego, အဆိုပါ LEGO Group
ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သောပထမအကျော့၌ကျန် BrickLink Designer Programme သုံးခု၏ရောင်းအားသည်ထင်ရသော်လည်းအားလုံးရပ်တန့်သွားသည်၊ Lego အုပ်စုသည် ၀ ယ်လိုအားမတန်တဆဖြစ်နိုင်သည်။
အောက်ပါ မတော်တဆရောင်းခြင်း စောင်ရေ ၁၀၀၀၀ 910001 သစ်တောအတွင်းရှိရဲတိုက် (မူလစီစဉ်ထားသော ၅၀၀၀ အစား) Lego အုပ်စုနှင့် BrickLink pre-order များကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါပြီ crowdfunding အစီအစဉ်၏ပထမအချီတွင်အောင်မြင်သောအခြားလေးအုပ်အတွက်၎င်းတို့အားနောက်ထပ်စောင်ရေ ၅၀၀၀ ကိုရောင်းချရန်အခွင့်အလမ်းပေးခဲ့သည်။
ဒါပေမယ့်စဉ် 910010 မဟာငါးဖမ်းလှေဒုတိယအသုတ်ရောင်းကုန်သွားပါပြီ နီးပါးမြန်သည် Daniel Van Zonneveld ကဲ့သို့ 910001 သစ်တောအတွင်းရှိရဲတိုက် ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်လုပ်ခဲ့တာ 910016 ရဲအရာရှိရဲ့ Safe, ၉၁၀၀၁၇ Kakapo နှင့် ပျံသန်းမှု၏ 910028 လိုက်စား အားလုံးမှာရနိုင်သေးသည်၊ အနည်းဆုံးဖြည်းဖြည်းချင်းရောင်းသည်၊ အနည်းဆုံးအခြားပယ်ချခဲ့သောနှစ်ခုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ Lego Ideas ဤပတ်လည်၌စီမံကိန်းများ
BrickLink Designer Program ရဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုစီမှာစုစုပေါင်းရောင်းအား ၁၀၀၀၀ နဲ့ဘယ်လောက်နီးစပ်တယ်ဆိုတာသင်တွေ့နိုင်ပါတယ် ဆင်းသက်စာမျက်နှာ. 910016 ရဲအရာရှိရဲ့ Safe တောင်ကိုရီးယား၊ သြစတေးလျနှင့်နယူးဇီလန်တို့တွင်ရောင်းထွက်သည်။ ပျံသန်းမှု၏ 910028 လိုက်စား တောင်ကိုရီးယား မှလွဲ၍ နေရာတိုင်းတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်၊ နိုင်ငံ ၃၀ မှမည်သူမဆိုသင်္ဘောအစီအစဉ်ကိုအော်ဒါမှာနိုင်ပါသေးသည် ၉၁၀၀၁၇ Kakapo - သို့သော်သူတို့၏တိုးတက်မှုဘားများသည်လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်အတွင်းအလွန်ဝေးကွာသွားခြင်းမရှိပါ။
အခြေခံအားဖြင့်အားလုံးသည်မွေးရာပါပြသနာနှင့်စကားပြောသည် Lego လူကြိုက်များမှုပေါ် မူတည်၍ စျေးကွက်ကိုသတ်မှတ်ရန်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်ရန်စျေးကွက်သတ်မှတ်ခြင်းထက်အုပ်စုလိုက်ထုတ်လုပ်မှုပမာဏကိုသတ်မှတ်ခြင်း။ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သုံးစွဲသူတွေအများကြီးရှိနေတုန်းဘဲ 910001 သစ်တောအတွင်းရှိရဲတိုက်ထိုရွေးချယ်မှုသည်၎င်းတို့အတွက်မရှိနိုင်ပါ၊ သို့သော်သုံးအုပ်အတွက်မျှော်မှန်းထားသောထောက်ပံ့ရေးသည်မလိုအပ်နိုင်ပါ။
ဤသည်မှာလူအုပ်ရန်ပုံငွေ၏သဘောသဘာဝဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်လုပ်ငန်းစဉ်မည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကိုနောက်သို့ပြန်ဆုတ်သည်။ ဟိသလား Lego အုပ်စုသည်အနာဂတ်လူစုလူဝေးရန်ပုံငွေပွဲများအတွက်နောက်ထပ်အပြောင်းအလဲများပြုလုပ်လိမ့်မည်၊ သို့သော်၎င်းကိုမြင်ရလိမ့်မည် ပြီးသားပြသ ဇူလိုင်လတွင်ကန ဦး စတင်ဖြန့်ချိမှုနှင့် ပတ်သက်၍ တုံ့ပြန်မှုနောက်သို့လိုက်လျောညီထွေသောချဉ်းကပ်မှု
ဤသုံးအုပ်သည်ရောင်းအား ၁၀၀၀၀ အထိရရှိရန်အချိန်ရှိသေးသည်၊ ဤ crowdfunding အဆင့်သည်သြဂုတ် ၃၁ အထိဖွင့်သည်။ သင်စိတ် ၀ င်စားပါကသင်၏အော်ဒါများတင်ရန်နှိပ်ပါ။ 910016 ရဲအရာရှိရဲ့ Safe, ၉၁၀၀၁၇ Kakapo နှင့် ပျံသန်းမှု၏ 910028 လိုက်စား.
← LEGO Super Mario 71394 Character Packs - Series3box ဖြန့်ချီသည်
LEGO ပိုများသည် Stranger Things 2022 အတွက်လာမယ့်အစုံ? →
အပေါ်အတွေး ၁၂၂ ခုLEGO BrickLink Designer Program ရောင်းအားအားလုံးရပ်ဆိုင်းသွားသည်"
သူတို့ကပိုထုတ်လုပ်ရင်ရဲတိုက်ကိုငါယူမယ်။ Lego အသက် ၈၀ ကျော်ကလေးများနှင့်အတူရဲတိုက်၊ အာကာသနှင့်ပင်လယ်ဓားပြများကိုနှစ်သက်သောအမှောင်ခေတ်မှထွက်လာသောသူတစ်ယောက်အဖြစ်ဤအချိန်၌ငါ့ကိုစိတ်မ ၀ င်စားဘဲငါဤအရာကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ထိုအသက်ကြီးသောအကြောင်းအရာများအတွက်လွမ်းဆွတ်ခြင်းများစွာရှိသည်။ Lego ဟာ LEGO ကိုပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့ AFOL တွေအများကြီးရဲ့ကပ်ရောဂါကနေအခွင့်အလမ်းပျောက်နေပြီး Minifigures တွေမပါဘဲအခုရနိုင်တဲ့လက်ရှိ AFOL မောင်းနှင်အားအစုံအများကြီးထက်သမိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပိုရှုပ်ထွေးတဲ့ဒီဇိုင်းတွေ/နည်းစနစ်တွေကိုအပြင်အဆင်တွေပြန်လုပ်ချင်တယ်လို့ငါထင်တယ်။ art အစုံ၊ ယာဉ်ကြီးများ၊ ဦး ထုပ်ဆောင်းပါ။ အဲဒါတွေကငါ့အတွက်မလုပ်ဘူး။ modular အဆောက်အ ဦး တွေကိုကြိုက်တယ်၊ အဲဒါကို ၀ င်ဖို့ကြိုးစားရတာနောက်ကျတယ်လို့ခံစားရတယ်။
Forest Castle ၏နှစ်ထပ်မိတ္တူကိုတည်ဆောက်ပြီးe2 ကို ၀ ယ်ချင်ပါတယ်xtra ငါ့ကလေးတွေကိုသူတို့အရွယ်ရောက်တဲ့အခါတည်ဆောက်ဖို့အတွက် ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာသည်ပျက်။ အစုများရောင်းချသည့်နေ့၌အလုပ်မလုပ်ပါ။ ပရိသတ်များသည်“ scalper” ၂ စုံထက်ပို ၀ ယ်လိုသူမည်သူမဆိုကိုခေါ်သော်လည်းကျွန်ုပ်၌ ၄ စုံအတွက်တရားဝင်အစီအစဉ်ရှိသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအစုလေးတွေရောင်းဖို့စုဆောင်းထားတဲ့အင်တာနက်အရုပ်ဆိုင်တွေမှာဘာဖြစ်နေတာလဲ။ Lego ကဘာကြောင့်လက်ကားမရောင်းတာလဲ။ ရဲတိုက်အတွက်ကြိုတင်မှာယူမှုတိုင်းကိုလက်ခံပြီးအချိန်နဲ့အမျှထုတ်ယူတာဘာကြောင့်မဖြစ်တာလဲ။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေနဲ့ Lego ရဲ့တစ်ခုတည်းသောပန်းတိုင်ကအစုံအသစ်တွေကိုရောင်းဖို့ဘဲ။ အဲဒီအစားသူတို့ကအခြေခံစျေးကွက်အင်အားစုတွေဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုနားမလည်ပုံရတယ်။ သူတို့က set production ကိုကန့်သတ်ခြင်းအားဖြင့် ဦး ရေပြားကိုအားဖြည့်ပေးပြီးဒီနာမည်ကျော်တွေအတွက်မတရားထုတ်လုပ်တဲ့နံပါတ်တစ်ခုကိုသတ်မှတ်ဖို့ကြိုးစားခြင်းအားဖြင့်အရူးတွေလိုပဲလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးတယ်။ Ideas အစုံ။ Castle သည်လာမည့်ပရိသတ်အကြိုက်ဆုံးအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ Lego သည်ဤ (နှင့်ပြန်လည်ထုတ်ဝေသင့်သော Castle Lowengrin) ထံမှအရိပ်အမြွက်နှင့်ပန်ကာဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောရဲတိုက်များအားပုံမှန်သိုလှောင်ခန်းအစုံများအဖြစ်ရောင်းချမည့်အစီအစဉ်တစ်ခုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ပရိသတ်များတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းများများစွာရှိသည့်အခါ3in 1 ရဲတိုက်ကဲ့သို့စိတ်ပျက်စရာအစုံများဖန်တီးရန်လူတို့ကိုအဘယ်ကြောင့်ငွေပေးသနည်း။ မင်းထင်သလို 5k၊ ဘာကြောင့် 10k နံပါတ်ကိုပထမနေရာမှာရွေးခဲ့တာလဲ။ preorder ကာလအတွင်း ၀ ယ်လာတဲ့ order တိုင်းကိုဘာလို့မဖြည့်တာလဲ။
06/08/2021 at 17:25
၎င်းသည်ကြော်ငြာမရှိခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ အစီအစဉ်အကြောင်းသိတဲ့သူတိုင်းဟာအခြားသူတွေကိုအနိုင်ယူဖို့အစောကြီးကတည်းကသူတို့ရဲ့အမိန့်ကိုရခဲ့တယ် artificial အရေအတွက် ဦး ထုပ် ငှက်ကိုဖန်တီးသူသည်အနည်းငယ်ကြေငြာခဲ့ပြီးသူ၏အော်ဒါမှာတစ်ထောင်အထိမြင့်တက်ခဲ့ပြီးအခြားစီမံကိန်းနှစ်ခုသည်သြဂုတ် ၃ ရက်နောက်ပိုင်းတွင်အနည်းငယ်ပိုတိုးလာသည်။
စိတ်မညစ်ပါနဲ့၊ ငါ့မှတ်စုတွေဖတ်တာမှားတယ်။ စီမံကိန်း ၃ ခုစလုံးသည်ကန ဦး သြဂုတ်လ ၃ ရက်အပြောင်းအရွှေ့အပြီးတွင်ရာဂဏန်းသာတိုးလာသည်။ ဆက်သွယ်ရေးပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နေသေးသည်။